Fihaonambe Copenhagen: Nanadino Ny Zava-dehibe Ireo Minisitra Nepaley · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Marsa 2018 9:26 GMT
Anna-Katarina Gravgaard, nahazo mari-boninahitra tao amin'ny “Pulitzer Center for Crisis Reporting”, nanamarika ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro araka ny hita ao amin'ny faritra be tendrombohitra Langtang ao Nepal.
“Mahita ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro manodidina azy ny olona: ny fahavitsihan'ny bozaka, ny fahavitsian'ny oram-panala sy ny ranomandry volon-davenona mafonja miala amin'ny tendrombohitra avo.
Tamin'ny volana jona, nandao an'i Kathmandu tamin'ny fiara jeep izahay, ary nandany telo andro nianika tendrombohitra mba hijery ny ranomandry akaiky indrindra. Nilaza taminay ny mpitari-dianay, Damondon Pyakurel, na DP, fa nihena hatramin'ny 20 metatra ny rindrin-dranomandry eo amboninay hatramin'ny nahitany voalohany azy 17 taona lasa izay. “
Mba hanasongadinana ny faneriterena tsapan'ny Himalayas noho ny fiovaovan'ny toetr'andro, nanao fivoriana tany akaikin'ny toby Everest ny Kabinetra Nepaley andro vitsy talohan'ny fihaonamben'i Copenhague. Bilaogera Ujjwal Acharya ao amin'ny The Radiant Star nidera ny fivoriana, ary nilaza fa hitranga ao amin'ny faritr'i Himalaya ny loza raha toa ka tsy voavaha haingana ny raharaha:
“Ny zava-dehibe voalohany sy manan-danja dia ny manao fanentanana momba ny fiempon'i Himalaya. Taona vitsy lasa izay, nisy ny fiahiahiana (fitantaran'ny fampahalalam-baovao) momba ny farihy Cho Rolpa izay teo am-bavam-pipoahana ary raha nitranga izany, dia mety nisy olana goavana teo amin'ny faritra lehibe – toerana eny amoron'ny renirano Tamakoshi. Nihena ny loza rehefa nandaniana vola be. Saingy mbola misy farihy hafa avo kokoa ao Himalaya izay mety ho vaky sy hampisy tondra-drano eo amintsika. “
Indrisy, tsy nahavita nanatanteraka ny hafatra tamin'ny fivoriana ny kabinetra Nepaley ary mampiseho fanairana mitovy raha nankany Copenhague izy ireo.
Nilaza ny bilaogy ny fiteny Nepaley MySansar fa feno minisitra, mpanolo-tsaina sy fianakavian'ny manampahefana izay tsy nisy nidirana tamin'ny fihaonambe ny delegasiona ofisialy Nepaley.
Satria nanomboka ny fihaonambe momba ny fiovan'ny toetr'andro tany Copenhague, nirohotra nankany amin'ny renivohitra Danoà ireo minisitra Nepaley. Minisitra valo mandray anjara amin'ny fihaonambe no mandefa hafatra lehibe ho an'ny vahoaka: jereo izahay, minisitra izahay. Afaka manao izay rehetra tianay. Raha tsy izany, tokony ho ampy ny fandraisana anjaran'ny Praiminisitra sy ny Minisitry ny Tontolo iainana ihany amin'ny fihaonambe. Saingy nitodi-doha tany Copenhague niaraka tamin'ireo mpandray anjara efa ho telopolo ny Praiministra – mpanolotsainany ny sasany. Efa tonga tany Copenhague sahady ny minisitra dimy. Nanao zavatra mihoatra ny iray amin'izy ireo, ny minisitry ny ala Deepak Bohara.
Niaraka tamin'ny minisitra ny vadiny, ny zafikeliny, ny zana-drahalahiny sy ny olona akaiky azy, tahaka ny sekreterany. Mety tsy hahazo fahafahana toy izany ny olona. Mety nihevitra i Bohara fa ity no fotoan'ny fialan-tsasatra sy mahafinaritra. Ary izany no mahatonga azy naka fianakaviana sivy akaiky azy ho any Copenhague.
Ny fihetsika tsy mitandrina ataon'ireo minisitra izay nandray ny fihaonambe ho toy ny fahafahana mandeha any ivelany amin'ny volan'ny mpandoa hetra dia azo antoka fa manimba ny fijerin'i Nepal amin'ny adihevitra momba ny fiovaovan'ny toetrandro. Niteraka fisalasalana amin'ny fahombiazan'ny fihaonambe iraisam-pirenena toy ny Copenhague 2009 ihany koa izany.